Economy Archives - Sa Ka War
Economy / Entertainment / International
အမျိုးသမီးစီးပွားရေးသမား တစ်ယောက်အဖြစ် ဥရောပခရီးစဉ်မှာဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အမှတ်တရ တွေကိုမျှဝေလိုက်တဲ့ ၀မ်း
အသံပါဝါ​ကောင်း​ကောင်းနဲ့ အမိုက်​စားသီချင်း​တွေကို သီဆို​လေ့ရှိတဲ့ အဆို​တော်​ Rဇာနည်​က​တော့ အရမ်းကိုချစ်​စရာ​ကောင်းတဲ့ ဇနီး​ချော​လေးရယ်​၊ သား​ချော​လေးနှစ်​​ယောက်​ရယ်​နဲ့အတူ ​ပျော်​စရာ​ကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝ​လေးကို ဖန်​တီးပုံ​ဖော်​ထားတာပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ဝမ်းကတော့ အာဇာနည်အတွက် တာဝန်ကျေပွန်တဲ့ ဇနီးချောတစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေး အပိုင်းမှာလည်း အောင်မြင်တဲ့ သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သားသမီးတွေအပေါ် လည်းဂရုတစိုက်နဲ့ မိခင်ကောင်းပီသသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့သူမဟာ MyanmarWomenleaders2019 ပရိုဂရမ်မှာပါဝင်ခွင့် …
နိုင်ငံတကာဇိမ်ခံသင်္ဘောများတွင် လုပ်ကိုင်ရန် မြန်မာအမျိုးသမီးများကို ပထမဆုံးအကြိမ် စေလွှတ်မည်၊ လစာဒေါ်လာ ၁ဝဝဝ အထိ ရရှိနိုင်မည်
နိုင်ငံတကာဇိမ်ခံသင်္ဘောများတွင် လုပ်ကိုင်ရန် မြန်မာအမျိုးသမီးများကို ပထမဆုံးအကြိမ် စေလွှတ်မည်၊ လစာဒေါ်လာ ၁ဝဝဝ အထိ ရရှိနိုင် နိုင်ငံတကာ ဇိမ်ခံသင်္ဘောများပေါ်တွင် တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် မြန်မာအမျိုးသမီးများ (Lady Seafarer)ကို ပထမဆုံးအကြိမ် စေလွှတ်မည်ဖြစ်ပြီး တလအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ဝဝဝ အထိ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံသင်္ဘောသားလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်မှ သိရသည်။ နိုင်ငံတကာခရီးသည်တင်အပျော် စီးသင်္ဘောများပေါ်တွင် မြန်မာအမျိုးသမီးများ တရားဝင်အလုပ် လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ပထမဦးဆုံးအသုတ်အနေဖြင့် …
Economy / Knowledge
မြန်မာနိုင်ငံဟာ အရှေ့ တောင် အာရှမှာ မီတာခ ဈေးအသက်သာဆုံးဖြစ်နေ…!
May 17, 2019 May 24, 2019 - by admin - LeaveaComment
အင်အယ်ဒီ အစိုးရမှ တိုင်းပြည်၏ တိုးတက် မြင့်မား လာနေသော လျပ်စစ်စွမ်းအင် လိုအပ်မှု ကို ထေမိစေရန် နောက် လာမည့် နှစ်နှစ် အတွင်း မီဂါဝပ် တထော င် ကို တရုတ်နိူင်ငံ မှ ၀ယ်ယူ ဖြည့်တင်းသွားမည်ဟု မနေ့က ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် လျပ်စစ် နှင့် စွမ်းအင် ၀န်ကြီးဌာန …
Economy / Health / International / Knowledge
May 15, 2019 May 24, 2019 - by admin - LeaveaComment
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဆေးရွက်ကြီးသောက်သုံးမှုကို ပြင်ပြင်းထန်ထန် ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ ဆေးလိပ်သောက်သူေ တွကို အလုပ်မခန့်ကြဖို့ လှုပ်ရှားမှုမှာ ဂျပန်ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးတွေ သဘောတူပါဝင်လာမှု များပြားလာနေပါတယ်။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ဟာ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ပိုကောင်းလာအောင် မြှင့်တင်ပေးရာရောက်သလိုေ ဆးလိပ်သောက်သူတွေဆီကနေ တစ်ဆင့်ပြန်လည် ရှုရှိုက်နေကြရတဲ့ အန္တရာယ်ကိုလည်း တားဆီးကန့်သတ်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတွေမှာ ရာထူးရာခံနဲ့ အလုပ်ဝင်မယ့်သူတွေဟာ အလုပ်ချိန်အတွင်းမှာဆေးလိပ်မသောက်ပါဘူး ဆိုတဲ့ ကတိစာချုပ်ကို အလုပ်မဝင်မီမှာ …
လူချင်းတူပြီး တန်ဖိုးကွာသွားရတဲ့အကြောင်း ( ဗန်းမော်သိန်းဖေ )…
လက်မအရွယ်ရှိတဲ့ ကျောက်စရစ်ခဲလေးတလုံးနဲ့ အရွယ်တူရွှေတုံးလေးတတုံးကို ရောင်းရင် ဘယ်ဟာကို ပိုက်ဆံပေးဝယ်ကြမလဲ။ ကျောက်ခဲအစား ရွှေတုံးလေးကိုပဲ ဝယ်မယ်ဆိုတာ ပြောပြစရာလိုမယ် မထင်ပါဘူး ဒါဖြင့် ကျောက်ခဲနဲ့ရွှေတုံးဟာ အရွယ်တူ အလေးချိန်သိပ်မကွာပဲ ဘာဖြစ်လို့ ရွှေတုံးကိုကျတော့ ပိုက်ဆံပေးဝယ်ပြီး ကျောက်ခဲကိုကျတော့ ပိုက်ဆံမပေးရတာလဲ။ အဲဒါ တန်ဖိုး(Value)ချင်းကွာနေလို့ပါ။ တန်ဖိုးကို ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်ကြတာလဲ။ ငွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ကြတာပါ။ ပြီးတော့ ပစ္စည်းရှားလေ တန်ဖိုးတက်လေ ဈေးကြီးလေပါပဲ။ သက်မဲ့ပစ္စည်းတိုင်းမှာ …
Despite the seeming ubiquity of McDonald’s Golden Arches and the Starbucks’ twin-tailed mermaid, sandwich chain Subway actually has the most locations of any restaurant worldwide. In 2017, Subway had 43,912 …
Turkey’s central bank needs to raise interest rates to contain the country’s financial crisis, veteran economist Stephen Roach told CNBC on Monday. Earlier in the day, Turkish lira dropped toanew …
Shares in Europe open slightly higher Wednesday as concerns over the Turkish currency crisis continue to affect investors’ appetite. However, trading flows were also sluggish asanumber of European …
With Sino-American trade tensions escalating, China’s cybersecurity standards could be used as an “invisible tool” for retaliating against Washington’s tariffs, according to one expert. Such standards are government-issued operational guidelines …
Speaking at an event marking his country’s independence from Japanese rule, Moon said sucha“community” could eventually herald the launch ofa“multilateral security system” in the region, according …